Nagu saabsan - Yantai Stamina Qalabka Macdanta Co., Ltd.
Yantai waa magaalo qurux badan oo soo kordhaysa xeebta, halkan waxaan ku haynaa silsilad sahay ah oo dhameystiran, taraafikada horumartay, dekedda Yantai iyo dekedda Qingdao ayaa aad ugu habboon in la geeyo adduunka oo dhan. Waxaan joognaa aagga ganacsiga xorta ah (FTA), dowladdu waxay siisaa siyaasado badan oo mudnaan leh oo lagu dhiirrigelinayo dhoofinta.
Dambiilahayaga sanduuqa loo dhoofiyo ee dibedda loogu dhoofiyo gobollo iyo dalal badan, qiime jaban iyo tayo la isku halleyn karo. Taarikadayada saxda ah ee shaandhada iyo dambiilaha centrifuge waxaa laga sameeyaa silig 304/316 SS ah, oo leh waxqabad qumman oo ku saabsan caabbinta daxalka, iska caabinta abrasion, wax ku oolnimada dhaqida dhuxusha iyo nolosha.
Durbaanka magnetic iyo VIBRATING BANAANA SCREEN sidoo kale waa alaabteenna caadiga ah, dhammaantood waa la habeyn karaa.
Waxaan khibrad u leenahay khabiiro alxamid aqoon u leh heerka alxanka caalamiga ah (DIN standard, AS standard / JIS standard / ISO standard ...), oo leh talaabooyin ogaanshaha cilladaha walxaha xirfadeed.
Waxaan haynaa dhammaan noocyada qalabka wax lagu qoro sida mashiinka weyn ee lathe, mashiinka qodista otomaatiga ah, mashiinka wax shiida, mashiinka dheelitirka iyo wixii la mid ah, oo leh hufnaan sare iyo saxnaan.
Kooxda farsamada waa nuxurkayaga, injineeradeenu waa kuwo khibrad fiican leh, oo leh heer naqshad sare leh awoodna u leh xalinta dhibaatada.
In kabadan 10 sano oo horumar isdaba-joog ah iyo hal-abuurnimo ka dib, Stamina waxay la aasaastay iskaashi xasiloon shirkado badan oo dibedda ah oo ku kala yaal Jarmalka, Australia, USA USA Mongolia iyo wixii la mid ah. Waxyaabahayagu waa ka reeban yihiin kormeerka macaamiisha badankood.Waxay khubaradayada khibrada leh, habka xakamaynta tayada xirfadeed, qalabyada kormeerka oo dhameystiran, qalabka waxsoosaarka saxda ah ee horumarsan iyo nidaamka adeegga iibka kaamil ah, waxaan hubaal hubineynaa in macaamiisheena ay ka heli karaan alaabada iyo adeegga ugu fiican. Stamina.
Yantai Stamina Qalabka Macdanta Co., Ltd.